Allgedo.com » 2012 » October » 20
Home » Archive Daily October 20th, 2012
Musharax Madaxweyne oo si weyn looga sugaayo Puntland
Ayadooo sanadka soo socdo la filaayo in la qabto doorashada Madaxweynanimada dowlada Gobaleedka Soomaaliyeed ee Puntland, ayaa hadana waxaa soo baxaayo Musharaxiinta u hanqal taageyso iney qabtaan xilkaas. Cabdullaahi Cali Barre (Ciddi Liibaax) waa musharax u taagan inuu qabto xilka Madaxweynaha Maamul gobaleedka Puntland sanadka soo socdo. Waxeyna sheegayaan illo wareedyo ku dhow musharaxa inuu ku...
Baafin Faadumo Cabdi Maxamed Khaliif oo markii ugu danbeysay ku sugneyd Gobolka NashaVille ee Magaalada Tannessee
Soomaalida degan Dalka Mareykanka, gaar ahaan Gobolka NashaVille ee Magaalada Tannessee oo laga Codasey in ay baadi goobaan gabar lagu Magacaabo Faadumo Cabdi Maxamed Khaliif oo maqan mudo ka badan ilaa 16 sano. Cabdi Maxamed Khaliif (Wise) oo ka mid aha dadka Soomaalida ah ee u dhoofay Wadanka Mareykanka sanadka markuu ahaa 1993dii, waxuuna degay Xilligaasi Gobolka NashaVille ee Magaalada Tannessee,...
Wiil 17 jir ah oo uu awow u yahay hogaamiyihii hore ee Waqooyiga Kooreeya Kim Jong Il oo wareysi la yaab leh bixiyay (Daawo Video)
Kim Han Sol, wiil uu awow u yahay hogaamiyihii hore ee North Korea Kim Jong Il. Wareysi uu dhawaan siiyay Teleefishanka Finland (qeybtiisa luuqadda Ingiriiska), Kim Han Sol oo ah wiil 17 jir ah oo uu awow u yahay Kim Jong Il oo ah hogaamiyihii hore ee mudada dheer soo xukumayay dowladda Waqooyiga Kooreeya (North Korea), kasoo hadda dhigta Jaamacadda United World College oo ku taala magaalada Mostar...